संचार: अवधारणाहरु, परिभाषा, प्रकार, वर्गीकरण र आधारभूत सिद्धान्तहरू
आत्म-खेती, Oratoskoe कला
मान्छे - यो सिर्फ जैविक जगतले, तर पनि सामाजिक व्यक्तित्व हो। मानिस मात्र प्राकृतिक, प्राकृतिक आवश्यकता पूरा गर्न पर्याप्त। खाना, पानी, निद्रा लागि इच्छा साथै एक प्रकारको सबैलाई जारी आफूलाई समाजमा महसुस गर्न आवश्यक छ। आफैलाई पाउन, आफ्नो "म" तिनीहरूका ऊर्जा र सीप केही मानिसहरू चाहनुहुन्छ मा, एक उपयोगी हुन फेंक, र बदलामा प्राप्त पहिचान र व्यक्तिगत सन्तुष्टि को एक अर्थमा। यो मानवता को लागि साँच्चै महत्त्वपूर्ण छ। अर्डर अरूसँग हुन र भावना, सोच, विचार, मानव कुराकानी गर्न आवश्यकता आफ्नो व्यक्त गर्न, कम्पनी मा हुन। तिनीहरूले यो वा त्यो व्यक्ति उद्योग वा पेशागत नै यसलाई आफ्नो विचार अपनाउनु, तिनीहरूलाई conversely निर्देशन वा, गर्न, मान्छे भेट्न आवश्यक सधैं छ भेटिएन छ के हो जहाँ, कुनै कुरा संचार, जताततै पाइन्छन्।
संचार के हो?
अहिले रूसी भाषा नयाँ ऋण शब्दहरू धेरै। र शब्द "सञ्चार" हामीलाई जो रूसी "सामान्य", "संयुक्त" मतलब ल्याटिन शब्द communico देखि आएको छ। यस सन्दर्भमा, अक्सर शब्द "सञ्चार" संचार पर्याय छ भन्छन्।
यो दुई वा बढी मानिसहरू दुवै दल गर्न परिचित छन् कि विषयहरूको बारेमा कुरा थिए जहाँ एक अवस्था हो। तिनीहरूले परामर्श गर्न सक्नुहुन्छ, बहस, उनको राय व्यक्त, तर स्रोत सधैं यो जानकारी प्राप्त र विपरीत प्रतिक्रिया छ संचार को फारम। अवधारणा, प्रकार समझ र उचित संचार लागि आवश्यक सर्तहरू को।
यो वर्गीकरण संरचना
संचार - अवधारणा बरु जटिल छ, तर यो यसको आफ्नै संरचना छ। संगठनात्मक र पारस्परिक: संचार2ठूलो समूह विभाजित गर्न सकिन्छ। उत्तरार्द्ध औपचारिक र अनौपचारिक हुन्छन्। यो स्पष्ट हुन्छ उपसमूहहरु नाम त्यहाँ एक निश्चित औपचारिकता एक विशेष कार्यक्रम मा निहित सही स्वरको आरोह अवरोह संग बाहिर छन् भनेर नियम अनुसार, संचार छन्। हामी, आफ्नो परिवार, साथीहरूलाई संवाद कसरी विशेष नियमहरू आदर छैन, र स्वाभाविक र casually व्यवहार यो छ अर्थात् त्यहाँ अनौपचारिक छन्।
संगठनात्मक संचार बाह्य, कि संगठन नै र त्यसको वरपरको वातावरण बीच उत्पन्न, साथै घरेलू, विभिन्न एकाइहरु र सरकारको शाखा बीच कम्पनी भित्र ठाउँ लिइरहेका छन् भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। यो समूह, बारी मा, विभाजित छ तेर्सो एकीकरण, छ, एउटै स्तर को एकाइहरु, र ठाडो बीच संचार, superiors र subordinates बीच। तसर्थ, संचार - आफ्नो विशिष्ट दृष्टिकोण र बुझाइ आवश्यकता को अवधारणा।
संचार क्षेत्र को मूल सर्तहरू
संचार को मूल अवधारणाहरु:
संस्कृति बोली - संवाद लागि भाषा तत्व को सही प्रयोग, सही छ। हरेक आत्म-आदर मानिस थाह छ र यसलाई र दिइएको अवस्थामा व्यवहार गर्न सक्छन् कसरी गर्नुपर्छ बुझ्नुहुन्छ र व्यवहार कस्तो बस अस्वीकार्य छ।
मौखिक संचार - यो कुराकानी आफ्नो दृष्टिकोण व्यक्त र कायम राख्न मौखिक निर्माण को आकस्मिक वा अर्थपूर्ण प्रयोग हो।
मौखिक व्यवहार - विभिन्न परिस्थितिमा निश्चित क्रांतियों को प्रयोग (काम मा साथी, परिवार, विद्यालय, आदि संग, ...)
भाषण घटना दुई तत्व हुन्छन्: जीवनमा विशिष्ट अवस्था, वातावरण जसमा कुराकानी र वार्ता गरे जुन मा तुरुन्तै भाषा नै।
भाषण गतिविधि - भाषा प्रयोग मानिसहरूलाई प्रभाव केन्द्रित अलग एक प्रकारको।
तसर्थ, संचार - जानकारी विनिमय संलग्न भाषाई संरचना को एक सेट समावेश एक अवधारणा।
संचार को धारणा
संचार छ - मान्छे बीच सम्पर्क विकास र स्थापना को एक बहु-faceted, जटिल प्रक्रिया हो। यो कुल संयुक्त गतिविधिहरु लागि आवश्यकता उत्पन्न भएको छ, र पनि एक रणनीति टूल्स वा समझ विकसित जो जानकारी विनिमय समावेश छ।
संचार को प्रकार
त्यहाँ संचार को2प्रकार छन्:
मौखिक। यो सहभागिता, जो मानिसहरू बीच सम्पर्क शब्दहरू, वाक्य मार्फत हुन्छ। हामी orally वा लिखित प्रयोग जो दैनिक, तर तरिका हामी शब्दहरू मा ध्वनि थप्न यो प्रजाति छ, र तिनीहरूलाई हामीलाई प्रत्येक को विचार र विचार प्रतिबिम्बित एक पुरा मुखबाट निस्केको वचन सिर्जना गर्नुहोस्।
अशाब्दिक संप्रेषण। संचार को यस प्रकारको आफ्ना भावनाहरूलाई व्यक्त को एक माध्यम जस्तै इशाराहरू, अनुहार अभिव्यक्ति, मानव मुद्रा, लग, टोन, अन्य पक्षलाई भौगोलिक स्थान र सम्बन्ध मा दूरी र यति मा गैर-मौखिक कार्यहरू एक प्रकारको छ। अवधारणा र गैर-मौखिक संचार को प्रकार - अन्वेषण गर्न एकदम एक रोचक विषय। यी संचार मदत विधिहरू देखि interlocutor महसुस र उहाँलाई तिर ठूलो चरण लिन।
साझेदार 'संचार को प्रक्रिया मा प्रभाव विधिहरू
संचार को प्रक्रिया मा सधैं interlocutors को एक को involuntary प्रभुत्व हुन्छ। उहाँले आफ्नो मित्र कुरा मा, dissuade गर्न, सल्लाह दिन वा कुनै पनि गलत लागि दोष सम्भ्काउनु, वा conversely गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी, मा विज्ञान र प्रत्येक अन्य मा4फैशन जोखिम विधि साझेदार प्रदान:
संक्रमण - अवस्थामा, त्यहाँ एक involuntary, विशिष्ट मानसिक अमेरिका गर्न अचेत मानव जोखिम हुँदा। आफ्नो साझेदार शाब्दिक यो बाहेक, तपाईं केहि हेर्न बन्द, आफ्नो विचार तपाईंलाई infects गर्दा हो।
सुझाव - unreasoned, आफ्नो interlocutor मा अर्थपूर्ण मानिसको प्रभाव। अक्सर हामी विक्रेता शाब्दिक यसको लाभ वर्णन, हाम्रो उत्पादनमा छडी कहाँ स्टोर, फेला यो विधि। हुनत उत्पादन को लाभ सधैं जायज हुन सक्छ।
मनाउनु - कार्य को मोड एक डाली-तर्क तर्क संग जानकारी प्राप्त गर्ने व्यक्ति को सहमति हासिल गर्न भन्ने तथ्यलाई आधारित छ। त्यो तपाईं आवश्यक जानकारी ग्रहण प्रचार एउटा खाली शब्द र तर्क कथन छैन।
अनुकरण - सुझाव र संक्रमण गर्न यसको विपरीत, यो विधि त्यहाँ बाहिर छ भन्ने तथ्यलाई मा हुन्छन् अन्य व्यक्तिको बाह्य सुविधाहरू सरल स्वीकृति, तर प्रदर्शन व्यवहार प्ले एक विशिष्ट तरिका छैन। त्यो स्रोत उहाँको साझेदार रूपमा व्यवहार, बस कुरा गर्न, एउटै स्थितिमा हुन प्रयास छ। अक्सर यो व्यवहार गर्ने निर्वाण र मानव विश्वस्तता बढाउँछ।
संचार प्रक्रिया को उद्देश्य
यो संचार को अवधारणा विचार गर्दा के यो सारा चक्र छ, बुझे गर्नुपर्छ। संचार प्रक्रिया जानकारी आदान प्रदान गर्न छ। यो मान्छे को एक समूह वा साझेदार संग एक व्यक्ति बीच उत्पन्न हुन सक्छ।
हामी संचार प्रक्रिया को अवधारणा कुरा भने, यो प्रक्रियाको लक्ष्य - अन्य व्यक्ति कस्तो थियो बुझे भनेर आवश्यक जानकारी व्यक्त गर्न। तर, भाषण केही पालैपालो को प्रयोग साझेदार तपाईं बुझ्न र जानकारी स्वीकार एक ग्यारेन्टी छ।
संचार प्रक्रियाको आधारभूत तत्व
को interlocutors सारा प्रक्रियाको अर्को लिंक पालना गर्न आवश्यक बीच क्रममा आपसी समझ हासिल गर्न।
त्यहाँ चार लिङ्क हुन्:
प्राप्तकर्ता - यो सुन्नुहुन्छ र सीधा सबै जानकारी देख्नुहुन्छ गर्ने मान्छे हो।
त्यहाँ केही जानकारी स्थानान्तरण छ जो हालतमा कि, - प्रवाह संचार।
सन्देश - व्यक्ति आफ्नो interlocutor गर्न व्यक्त गर्न चाहन्छ कि जानकारी।
प्रेषक - सीधा पठाउँछ र साझेदार सही जानकारी दिन्छ गर्ने व्यक्ति।
तसर्थ, संचार र संचार प्रक्रिया को अवधारणा तिनीहरूले नै संरचना को पूरक तत्व हो भनेर सुझाव।
मुख्य मतभेद संचार देखि संचार छन्
संचार र संचार को अवधारणा उनि एकदम समान हो, र हामी सबै भन्दा कुराकानीमा तिनीहरूलाई बीच भेद छैन भनेर भन्छन्। तर, यी शब्द पर्याय हुन्, ती मतभेद को एक नम्बर:
संचार मा, जानकारी र महत्त्वपूर्ण र भावनात्मक पृष्ठभूमि यसको विश्लेषण र डाटा नै धेरै सामग्री बाहेक, संचार गर्न विपरीत मा।
मुख्य, मुख्य संचार को समारोह को साझेदार बीच सम्पर्क स्थापित गर्न छ, र संचार को मामला मुख्य कुरा मा - स्थापना र संचार को विधिहरू चयन गर्न, त्यो छ, अभिव्यक्ति को एक मौखिक वा गैर-मौखिक हालतमा चयन गर्नुहोस्।
संचार - यसको संरचना, शब्द "सञ्चार" मा समावेश जो अझ सामान्य अवधि छ।
निष्कर्षमा, हामी वास्तवमा उल्लेख हुनुपर्छ भन्ने संचार - प्रासंगिक जानकारी को लागि सावधान विचार र अध्ययन प्रतिवेदन आवश्यकता बहु-faceted को अवधारणा। यो व्यवसाय को प्रबेश र बहिष्कार थाह, तपाईं अन्य पार्टी लागि आवश्यक छ कि जानकारी दिन सक्छन्। बोली विभिन्न पालैपालो, गैर-मौखिक लागू संचार को माध्यम र खातामा डाटा सामग्री र interlocutor को भावनात्मक राज्य लिइरहेको, तपाईं संचार प्रक्रिया को लागि सही वातावरण सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ। यो नियम सम्झना र व्यापार वार्ता समयमा संचार को जाच्ने र काटछाट गर्ने पालन गर्न आवश्यक छ, र तपाईं आराम र व्यक्तिगत, अनौपचारिक बैठक आफूलाई हुन सक्छ। भण्डारण र आधारभूत नियम प्रयोग राम्रो संगत र सम्झौता को विश्वसनीय सफल निष्कर्षमा सुनिश्चित गर्नेछ।
वयस्कहरूको लागि जिब्रो Twisters: उदाहरण। जटिल patters वयस्क मा diction सुधार
विश्वव्यापी भाषण कोड - यो प्रत्येक थाहा आवश्यक छ
भाषण विधा: परिभाषा, प्रकार। oratory
"जादू" पनि अप्ठ्यारो कुराकानीमा बचत गर्न सक्छ भन्ने वाक्यांश
आफ्नो छिमेकीको अप मज्जा रूपमा: सबै अवसरका लागि प्रोत्साहन को वाक्यांश
Oratorical बोली के हो? प्रदर्शन उदाहरण
औसत उचाइ एक मानिस। के मानिसहरू औसत वृद्धि छलफल?
Analogues कसरी चयन गर्न "rumalon"? के राम्रो तयारी "Alflutop" वा "rumalon"
खट्टा क्रीम मा स्क्विड कसरी खाना पकाउनु? एक लास स्क्विड तयारी
शाखा - यो के हो? अवधारणा, वर्गीकरण र उद्योग को प्रकार
बार प्लास्टिक जाल - किफायती र व्यावहारिक बार
Kalina Krasnaya: उपयोगी गुण र contraindications
भावनाहरूलाई रोक्न कसरी सिक्न - मनोवैज्ञानिक सल्लाह, व्यावहारिक सिफारिसहरू
अभिनेत्री कार्ला अल्वारेज: क्यारियर, चलचित्र, व्यक्तिगत जीवन
रूसी राष्ट्रिय भोजन - यो सय भन्दा पढ्न पटक, पटक प्रयास गर्न राम्रो छ!
आन्द्रे गबिनको विकासले कसरी आफ्नो क्यारियरलाई असर गर्यो
रोचक Filmography व्लादिमीर Zelensky
Pastore Vinsent: जीवनी र काम